Heshiis Cusub: Shirkada DP World oo balaarisay joogitaankeeda Somaliland
DUBAI- Shirkada DP World ayaa balaarisay maalgalinta ay rabto iney ku sameyso Somaliland, kadib markii ayaa iclaamisay iney ka dhiseyso maamulka gooni isu taaga ah Aag Dhaqaale (Economic Zone).
" Waxaan eegeynaa in dhameytirno heshiiskaan aaga dhaqaale laga dhisayo magaalada Berbera marka dowlada cusub ee Somaliland xilka la wareegto anagoo rajeyneyna in wadashaqeynteenu sii socoto," ayuu yiri bin Selayem.
" Aragtiyada mustaqbalka ayaa ah in dekada Bebera ka dhigno xarunta ganacsiga iyo gadiidka geeska Africa waxaana rajeyneynaa in wadagaarno higsigaas," bin Sulayem ayaa sidaas yiri Isniinta.
Dekada Bebera ayaa hadda laga dhoofiyaa Geela iyo Ariga la geeyo wadamada Barriga Dhexe iyadoo cuntooyinka laga soo dajiyo. Waxay sidoo kale uga faa'ideysaa dalka Ethiopia dhinaca badeecadaha u socda kuwasoo ku yimaada dhinaca Badda.
Heshiiskaan cusub ayaa ku soo beegmaya xilli muran ka jiro dekado Boosaaso oo shirkada P&O oo hoos tagta DP World maamusho. Ganacsatada Puntland ayaa ka cabanaya hehsiiskaan sida loo dhigey kuwasoo Madaxweyne Gaas iyo Wasiirkiisa Dekadaha ku eedeynaya ineysan wadatashi badan ka sameyn gali-taankiisa.
Dowlada Puntland ayaa hakisay hisrgalinta hishiiskaan muddo Toban cisho ah kadib markii Ganactada diideen in dekada kala soo dagaan badeecadahooda madaama lacagta laga qaadayo badan tahay.
Madaxweynaha Puntland ayaa la filayaa in booqasho ku yimaado dalka Imaaraadka Carabta isagoo la filayo in kala xaajoodo caqabadaha hortaagan hirgalinta heshiiska ay la galeen shirkada P&O.
Taliyaha howlgalka EU-da ee ka hortaga burcad-badeeda oo tegay Boosaaso
Puntland 25.03.2019. 18:17
Weerar ka dhacay Boosaaso iyo wararkii ugu dambeeyay
Puntland 22.11.2018. 10:33
Puntland 24.04.2019. 12:28